jasmine(တောင်ကြီး) November 22, 2011 at 10:07 PM
အဲဒီ ပြန်မချစ်ရင်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့သေနတ် တစ်ကယ်လို့မလေးရှားလာဖြစ်ရင်ယူခဲ့ပါကွယ်
Mishell November 22, 2011 at 10:17 PM
Very interesting & amazing trip! Cheers! May fulfil of your wish & pass successfully of your exam! Well done, well done, well done of your merit! I want to get one of your souvenior handchain. :P
ငါသိချင်တာကတော့ နင်တာဇံနဲ့တွေ့ ခဲ့ဘူးလားဟ ..မတွေ့ ဘူးဆိုရင်တော့..အပိုကြီး..အဲမှားလို့အပျိုကြီး ဘ၀နဲ့ အရိုးထုတ်ရမယ်..ဟွင်းဟွင်း လူကဖြင့် စိတ်လက်တဆစ်နဲ့ 16 နှစ် အပျိုကြီးဆိုဒ်ကဖမ်းချင်သေးးမုန်ချင်စရာကြီး..တိမယ်..
မောင်ဘုန်း November 22, 2011 at 10:56 PM
အပျိုကြီးရေ ... ပြန်ရောက်ပြီပေါ့ ... တော်တော် လည်းမောလာပြီ ထင်တယ် ...
အခုလို ခရီသွားမှတ်တမ်းလေး ကို မျှဝေ ပေးတဲ့ အတွက် ရော
ဘု၇ားမှာ ကုသုလ် တွေ ပြု ခဲ့တဲ့အတွက်
ကျောင်းက အောင်စရင်းမှာ ... နာမည် လေး ရေးပေးလိုက်ပါပြီ .....
blackroze November 22, 2011 at 11:27 PM
ကိုရင် November 23, 2011 at 12:37 AM
တစ်ခါသွားတာ မပီးနိုင်တော့ဘူး..ပျင်းတာနဲ့ရောနေပီ တူတယ်..
ဟွင်းဟွင်း..ဒါနဲ့..လိပ်ဥတွေ ဘယ်ဈေးနဲ့ ရခဲ့တုန်း..:D
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် November 23, 2011 at 12:13 PM
နောက် ဘ၀ခရီးအတွက် စဉ်းစားထားနော် မီးမီးလေ
ကိုယ်တိုင်မစဉ်းစားလို့ မိဘကောင်းတယ် စီစဉ်မှ ချိတ်မဆိုး
ညီရဲ November 23, 2011 at 1:29 PM
ညီမရေ... ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကို နောက်နှစ်တွေမှာလဲ ဖူးမြော်ရပါလို၏လို့ ဆုတောင်းရင် ပြည့်တယ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောကြတယ်...ညီမတောင်းတဲ့ဆု ပြည့်ပါစေ ညီမရေ...
ဘုရားတွေ ဖူးသွားတယ် ညီမရေ...
ကောင်လေးငယ် November 23, 2011 at 9:39 PM
ပျိုကြီးစံ ဝယ်လာတဲ့လက်ဆောင်တွေထဲက ဝါးသေနပ်ကြီးလိုချင်တယ်.. ကိုယ့်ကိုပြန်မချစ်တဲ့သူပြစ်ချင်လို့..
ဘုရားတွေလည်းဖူးသွားပါတယ်နော်.. ပျိုကြီးစံရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေ ဂျာ......
mstint November 23, 2011 at 9:52 PM
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကြီးကို မြင်တိုင်း အရင်နှစ်စဉ်ဆက်တိုက် ဖူးခဲ့တဲ့ဘဝလေးကို ပြန်သတိရတယ် သမီးစံရေ။ ဘုရားတွေအများကြီး ဖူးခွင့်ရအောင် မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်။
လမင်းငယ် November 24, 2011 at 12:03 AM
san htun November 24, 2011 at 9:27 AM
ဘော်ဒါတွေအတွက် မမေ့မလျှော့ လက်ဆောင်ဝယ်ပြီး ဝယ်တဲ့ သမီးစံ စာမေးပွဲကို ဂန်ဒူး အဲလေ ဂုဏ်ထူးတွေနဲ့အောင်မြင်ပါစေဗျား
အင်း သမီးစံတစ်ယောက် ကြော်ငြာလေးဝင်လိုက်၊ ဇာတ်လမ်းလေးဆက်လိုက်နဲ့... ပရိသတ်တွေက ၇ နာရီဇာတ်လမ်းတွဲစောင့်ကြည်သလို စောင့်ကြည့်နေကြတာနော်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲပြီးရင် နောက်ဘာဇာတ်လမ်းတွဲတင်ဦးမှာလဲမသိ ကိုးရီးယားစံရေ...
ပိတောက် November 25, 2011 at 12:14 PM
မှာတဲ့ ဝါးသေနတ်က တလက်ပဲလား ၊ အေးလေပါရင်ပြီးတတာပါပဲ ကျေးကျေး
ဖိုးသိကြား November 26, 2011 at 9:50 AM
ဘုရားတွေ လိုက်စုဆောင်းရင်းနဲ့ ဘုရားတွေပါ ဖူးသွားပါတယ်..။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကို မရောက်ဖြစ်တာ နှစ်အတော်ကြာသွားပြီ..။ ဖူးလိုက်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ လိုချင်တဲ့ ဘုရားပုံတော်တွေလည်း ကူးယူသွားပါတယ်နော်..။
Crystal December 6, 2012 at 8:41 AM
ရှာဖွေရင်း အခုမှ လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ဟိဟိ